Garth Crooks Oo Ku Dhawaaqay Kooxdii Ugu Wanaagsanayd
By axadle	 Last updated Sep 15, 2020
Khabiirka ciyaaraha, Garth Crooks ayaa soo xushay shaxda kooxdii ugu wanaagsanayd usbuuca koowaad ee horyaalka Premier League oo ay dhaceen siddeed ciyaarood.
Bruno Fernandes: I can increase Cristiano Ronaldo’s record bid
Mauricio Pochettino reveals the clubs that approached him …
Horyaalka Premier League ayaan laga diiwaangelinin wax barbarro ah usbuucan, waxaana dhamaan siddeeddii ciyaarood ee dhacay lagu kala badiyey goolal ka badan 1 marka laga reebo laba kulan oo min 1-0 kusoo dhamaaday.
Ciyaaryahanno badan ayaa bandhig wanaagsan muujiyey usbuucan, waxaanay qaarkood ahaayeen saxeexyadii cusbaa ee kusoo biiray horyaalka Premier League, halka laacibiinta qaarkoodna yihiin kuwo hore usii joogay oo naadiyadooda beddelay, sida Willian oo Chelsea ka tegay una wareegay Arsenal.
Khabiirka ciyaaraha, Garth Crooks oo ka hawl-gala BBC Sports ayaa toddobaad walba sameeya shaxda kooxda ugu wanaagsanayd kulamada dhacay, waxaana markan uu soo xushay xiddigo aanay doodi ka iman karayn oo ahaa kuwii ugu mudnaa garoomada.
Kulankii dhex-maray Crystal Palace iyo Southampton ee kusoo dhamaaday 1-0 ay Palace guusha ku gaadhay, waxa libinteeda ay uga mahad-celiyeen goolhaye Vicente Guaita oo muujiyey bandhig cajiib ahaa, isaga oo u babbac-dhigay, iskuna duubay kubbado ahlis ahaa oo goolal noqon karayay.
Danny Ings ayuu ka diiday inuu shabaqiisa gaadho inkasta oo uu haliso badan sameeyey, waxaana uu guusha iyo saddexda dhibcood ba ugu ilaaliyey kooxdiisa goolkii uu dhaliyey Wilfried Zaha.
Difaaca waxa si weyn isku muujiyey Castagne oo Leicester City u buuxiyey booskii uu banneeyey Ben Chilwell oo u wareegay Chelsea, waxaana bandhiggiisa uu ku mutaystay inuu kusoo baxo kooxda toddobaadka.
Saxeexa cusub ee Arsenal ee Gabriel Magalhaes ayaa isaguna wacdaro ka dhigay Is-aaragii Fulham oo uu gool dhaliyey, isla markaana ciyaar tayadeedu sarrayso iyo hab-difaac wanaagsan uu la yimid.
Romain Sais oo Wolves ah ayaa isaguna kusoo baxay kooxda usbuuca ee Gareth Crook, waxaana ku wehelinaya Lamptey.
Mohamed Salah oo saddexlay dhaliyey, Dominic Calvert-Lewin oo saxeexay goolkii ay Everton ku garaacday Tottenham iyo Aubameyang oo gool ku darsaday guushii Arsenal ee Sabtidii ayaa uu Gareth Crook usoo xushay shaxda usbuuca.
Qaab-Ciyaareedka usbuuca ee Gareth Crook:
Goolhaye: Vicente Guaita (Crystal Palace)
Difaaca: Timothy Castagne (Leicester), Gabriel (Arsenal), Romain Saiss (Wolves), Tariq Lamptey (Brighton)
Dhexda: Jeff Hendrick (Newcastle), James Rodriguez (Everton), Willian (Arsenal)
Weerarka: Mohamed Salah (Liverpool), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)
axadle 5536 posts
Libya’s Haftar concurs to boost the oil blockade with…
Rights crew ‘affected’ via chaos in western…